Zim Transition unparralled: PAP
In an interview with journalists after meeting President Mnangagwa at his Munhumutapa Offices in Harare, Mr Dang — whose term as head of PAP is set to end this May — congratulated the new administration.
“We came here to congratulate the new leaders and also congratulate the people of Zimbabwe who did very well,” he said.
“We have never seen the kind of transition we saw here in November, very peaceful transition and I think we have to congratulate the people in Zimbabwe in general.”
Mr Dang said his discussion with the Head of State and Government and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defence Forces (ZDF) centred on the forthcoming harmonised elections and the need for Zimbabwe as a member of PAP to ratify the Malabo Protocol.
The Malabo Protocol — also called the Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights — was adopted by the African Union Assembly of Heads of State and Government in Malabo, Equatorial Guinea, in June 2014.
“We are waiting for the current Minister of Justice (Cde Ziyambi Ziyambi) now to bring the Protocol to Parliament so that we might ratify and comply with the requirements of the Malabo Protocol.”